Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Naajayaz Ee Maanta Oo Kale La Daawaday Ajay Waa Ka Baxsaday (+Video) – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Naajayaz Ee Maanta Oo Kale La Daawaday Ajay Waa Ka Baxsaday (+Video)
Naajayaz waa film Classic ah sido kalena ganacsi dhex dhexaad ah sameyay asigoo Average noqday ama film guulestay, waxaana wada jileen Ajay Devgan, Juhi Chawla, Naseeruddin Shah, Deepak Tijore, Reema Lagoo, Gulshan Grover iyo kuwa kale oo badan.
Filmkaan waxaa la daawaday maanta oo kale 17 Maarso sanadkii 1995 ayadoo uu Director ka ahaa Mahesh Bhatt, hadaba halkaan hoose kaga bogo xaqiiqada filmkaan laga diiwan galiyay:
Xaqiiqada 1aad: Suniel Shetty ayaa markii hore saxiixday doorka Deepak Tijore filmkaan kulahaa balse marki dambe waa laga saaray jilaagan mashruucan oo dhan lamana garanaayo sababta.
Xaqiiqada 2aad: Atooraha Atul Agnihotri ee ah atoorihi ku jiray filmkii Aatish ee ay soo malida u taqaano Avinaash ayaa loo bandhigay doorka Deepak Tijore filmkaan kulahaa balse Atul wuu iska diiday mashruucan.
Xaqiiqada 3aad: Ajay Devgan ayaa markii ugu horeysay filmkaan ugu tartamay abaal marinta Filmfare Awards qeybta atooraha ugu wanaagsan bandhigiisa filmka heerka sare ahaa awged.
Xaqiiqada 4aad: Music-kada filmkaan waxaa saaray Anu Malik asigo aad loogu amaanay waliab heesaha filmkaan heesta ugu weyn ee aadka u gadantay waa heeska “Barsat Ke Mausam Mein” waxaana ugu wacned Music wacan ee Anu Malik.
Xaqiiqada 5aad: Waa Filmkii kowaad ee ay kasoo wada muuqdan AJay Devgan iyo Juhi Chawla waxuu mashruucan kadambeyay waxay wada sameyeen labo film kale kuwaaso kala ah Ishq iyo Son of Sardaar.
Xaqiiqada 6aad: Waa filmkii labaad ee ay wada sameyaan Ajay Devgan iyo Naseeruddin Shah guud ahaana filmada ay wada sameyeen waxay kala yihiin Bedardi, Naajayaz, Omkara iyo Raajneeti.
Halkaan Hoose Ka Daawo Heesaha Filmkaan Ugu Caansan:
Waxaa Aqrisay 172